अस्वीकरण - उद्धरण प्याडिया
हामी सबैलाई दैनिक जीवनमा आउन केही प्रोत्साहन र प्रोत्साहन चाहिन्छ। आशावाद र आशाले हामीलाई अगाडि हेर्न र हामीलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्दछ। प्रेरणाले हामीलाई आफैलाई बढी धक्का गर्न र साहसी भई चुनौतीहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ। यसले हामीलाई अरूसँग प्रेरणा दिन र समानुभूति प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ जसले आफ्नो जीवनमा समस्याहरू सामना गरिरहेका छन्।
आफैलाई आवश्यक प्रेरणा दिनको एक उत्तम तरिका प्रेरणादायक र यथार्थपरक उद्धरणहरूको एक उत्तम स through्ग्रहको माध्यमबाट जाँदैछ। उद्धरणहरू एकदम स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्दछ र यस्तो स्थितिमा अपील गर्दछ जुन अन्यथा जटिल र सामना गर्न गाह्रो हुन सक्छ। जब चीजहरू राम्रो हुन्छन्, एक अर्थपूर्ण उद्धरणले तपाईंलाई तपाईंको आनन्दलाई मायापूर्वक राख्न र हामीसँग भएको कुराको लागि कृतज्ञ हुन सिकाउँछ।
Quotespedia.org उद्धरणको लागि अन्वेषण गर्नको लागि उत्तम ठाउँ हो जुन जीवनको हर हिसाबमा अपील गर्दछ। यसमा जीवनको हरेक हिड्ने मानिसहरूका उद्धरणहरूको संग्रह हो जुन तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ। उद्धरणहरूले १ 14 बर्षे उमेरलाई अपील गर्न सक्छ र 65 XNUMX वर्ष पुरानोलाई पनि उत्प्रेरणा दिन सक्छ किनकि यी सबै उद्धरणहरू कालरहित र व्यावहारिक छन्।
वेबसाइटले तपाईंलाई शीर्षक खोजी गर्न अनुमति दिँदछ र त्यसपछि तपाईंलाई चयनित शीर्षकमा विश्वभरिका मानिसहरूले उद्धरणहरूको विशाल संग्रहमा खोल्छ। त्यसोभए, अन्वेषण जारी राख्नुहोस्, प्रेरणा पाउदै, र अरूलाई पनि प्रेरित गर्दै!
यदि तपाईंले कुनै उद्धरण (हरू) फेला पार्नुभयो भने तपाईं प्रतिलिपि गर्न चाहानुहुन्छ र / वा तिनीहरूलाई तपाईंको ब्लग / वेबसाइट वा अन्य कहीं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, यो वेबसाईटमा एट्रिब्यूट दिनका लागि एक दयालु इशारा हुनेछ।
यस वेबसाईट प्रयोग गर्नु अघि कृपया तलका अस्वीकरणहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्।
Quotespedia.org हेर्नुहोस् सेवाका सर्तहरु र गोपनीयता नीति.
यो अस्वीकरणले Quotespedia.org को तपाईंको प्रयोग चलाउँछ। यो वेबसाइट प्रयोग गरेर, तपाइँ पूर्ण रूपमा यस अस्वीकरणलाई स्वीकार्नुहुन्छ। यदि तपाईं यस अस्वीकरणको कुनै पनि भागसँग असहमत हुनुहुन्छ भने कृपया Quotespedia.org वा कुनै सम्बद्ध वेबसाइट, सम्पत्ती, वा कम्पनीहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। हामीसँग कुनै पनि समयमा यी सर्तहरू परिमार्जन गर्ने अधिकार आरक्षित छ। तपाईले परिवर्तनहरूको लागि आवधिक रूपमा जाँच गर्नुपर्नेछ। हामीले कुनै पनी परिवर्तन पछि यो वेबसाइट प्रयोग गरेर, तपाईं ती परिवर्तनहरू स्वीकार गर्न सहमत गर्नुहुन्छ, चाहे तपाईंले उनीहरूको समीक्षा गर्नुभएको हो कि होइन।
Quotespedia.org मा प्रयोग गरिएका छविहरू प्रतिलिपि अधिकार नि: शुल्क वेबसाइटहरू, साथीहरू, र प्रयोगकर्ताहरूबाट लिइएको हो, र विश्वास गरिन्छ कि "सार्वजनिक डोमेन" मा। हामी तिनीहरूलाई स collect्कलन गर्छौं, रिमिक्स गर्दछौं, र तिनीहरूलाई ग्यालरीहरूमा राख्छौं। यदि तपाईं कुनै पनि छविको सही मालिक हुनुहुन्छ र यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् र हामी माग अनुसार क्रमशः हटाउनेछौं।
यस वेबसाइटमा प्रस्तुत उद्धरणहरू केवल शैक्षिक र प्रेरक उद्देश्यका लागि हो र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि उपलब्ध छन् र नि: शुल्क छन्। तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्दा त्यहाँ कुनै लुकेका लागतहरू सामेल छैनन्।